Ndị na -emepụta ihe na -emepụta ihe na -ehicha ihe China agụụ Lifter Factory
Agụụ lifterbụ otu n'ime ngwaahịa ire ahịa anyị kacha mkpa nke gụnyere igwe na -ebuli oghere, ihe na -eme ka efere efere na ndị ọzọ na -ewepụ ihe na ihe ndị ọzọ. Akụrụngwa na -ejikwa njikwa sistemụ abụọ, otu otu sistemụ oghere na -arụ ọrụ, otu otu na -echekwa. Ọ na-anabata mgbapụta ikuku nke THOMAS DC, ika Italiantali METALROTA wiil na-anya ụgbọ ala dị arọ, ọdụ ụgbọ mmiri Switzerland BUCHER na naanị batrị na-enweghị ndozi. N'oge eji, ịga ije eletriki, mbuli elu eletriki eletriki eletriki nwere ike ime na -enweghị isi ikuku ma ọ bụ ọkụ eletrik. , Ntughari akwụkwọ ntuziaka 360, tụgharịa akwụkwọ ntuziaka 90 na ọrụ ndị ọzọ.
A na-eji ọnụ ụzọ iko iko ime ụlọ arụ ọrụ, mmiri eletrik na mmịpụta, mbuli elu na mmegharị ntuziaka, adaba na ịchekwa ọrụ.
Ọ bụ batrị na -ebu iko iko iko eletriki, ọ chọghịkwa ịnweta eriri, nke na -edozi nsogbu nke enweghị ike na -adịghị mma na saịtị ahụ. Ọ dabara nke ọma maka nrụnye iko enyo dị elu dị elu ma nwee ike ịhazi ya dabere nha
A na -eji ihe mbuli iko ihe nhicha anyị maka ịwụnye na ijikwa iko, mana n'adịghị ka ndị nrụpụta ndị ọzọ, anyị nwere ike nweta ihe dị iche iche site na dochie iko mmiri. Ọ bụrụ na edochie iko mmiri ogbo, ha nwere ike banye osisi, ciment na efere igwe. .
A na-eji ụdị DXGL-HD ụdị iko iko ihe eji eme ihe maka ịwụnye na ijikwa efere efere. Ọ nwere ahụ dị nfe ma na -arụ ọrụ nke ọma na mpaghara ọrụ wara wara. Enwere nnukwu nhọrọ ibu n'etiti ụdị dị iche iche, nke nwere ike gboo mkpa ndị ahịa nke ọma.
N'ezie, ntụgharị akwụkwọ ntuziaka na tụgharịa akwụkwọ ntuziaka nwere ike ịnwe ntụgharị eletriki ma ọ bụ tụgharịa. Robot iko mmiri ara a nwere ike siri ike yana ebuli elu kwụsiri ike. Ejiri ya na igwe onyonyo dijitalụ PANASONIC dijitalụ na -agbagharị mgba ọkụ na ihe nlele mmanụ, nke nwere ike nyochaa ọrụ nchekwa nke ngwa ahụ nke ọma. Sistemụ akwụ ụgwọ mgbali agụụ arụpụtara na-eme ka o doo anya na a na-edobe sistemụ oghere niile na uru nrụgide dị nchebe mgbe niile mgbe a na-eji iko. Mgbe ike daa na mberede, ọrụ njigide nwere ike ịgbatị oge nhazi ihe mberede ma jiri ya rụọ ọrụ nke ọma. A nabatara nhazi a na -agbanwe agbanwe. Enwere ike ikpokọta ya n'ụzọ dị iche iche dịka mkpa si dị, na -agbanwe ọnọdụ iko iko na iko mmiri ọ bụla nwere valvụ njikwa dị iche, nke nwere ike ịmị ụdị na ụdị iko dị iche iche.